यी खानेकुरा दूधसँग किन खानुहुँदैन ? - Everest Dainik - News from Nepal
यी खानेकुरा दूधसँग किन खानुहुँदैन ?
आजभोलि मानिसहरु आफ्नो स्वास्थ्य स्वस्थ र फिट राख्नका लागि बिहान–बेलुकी दूध पिउने गर्दछन् ।
तर, दूध पिउँदा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस् । दूधसँग यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहोस् । जसको कारणले शरीरमा विभिन्न समस्याहरु आउन सक्छ ।
दूध र दही वा कफी नखाने, यदि खाएमा एसिडिटी, ग्याँस तथा कब्जियतको समस्या हुन्छ । यसमा एक डेढ घण्टाको फरक राख्नु राम्रो हुन्छ ।
० मासको दाल र दूध खाँदा अपच हुन्छ ।
० दूधका साथमा सुन्तला, मौसमजस्ता अमिलो जातका फल खानु उपयुक्त होइन ।
० जसलाई कफको समस्या छ, उनीहरूले दूध र केरासँगै खानुहुँदैन, किनभने यी दुवै खाद्यसमाग्री कफ कारक हुन् ।
० दूधसँग माछा खाँदा ग्यास बढ्छ, त्यस्तै छालाको समस्या समेत सिर्जना हुनसक्छ ।
याे पनि पढ्नुस चिसोमा बच्चाको स्याहार कसरी गर्ने ? जान्नुहोस् १५ उपाय
० दूधका साथ तारेको–भुटेको खाना पचाउन गाह्रो हुन्छ र छालाको समस्या समेत वृद्धि हुन्छ ।
० दूध र नुन अथवा नुन हालिएको परिकारविरुद्ध आहार हो ।